MDC-T leader Douglas Mwonzora distances himself from the Khupe aide violent attack - Mbare Times
MDC-T leader Douglas Mwonzora distances himself from the Khupe aide violent attack. Kudzanai Mashumba is alleged to have tried to address the media this afternoon (October 21), in Harare on the pretext of representing the party, which was resisted by some party members and left property destroyed at Media Centre in Harare.
He said they were not part of the violence that took place and one of their party members Yvonne Musarurwa tried to stop people from attacking Mashumba. “We are not violent and if you look at the videos circulating, one of our members Yvonne Musarurwa was actually shouting so that people stop attacking Mashumba,” said Damba.
However, Damba said that the incident occurred outside Jurisdiction of harvest house so police have every right to investigate since the press conference was illegal. In a statement issued by Mashumba, the party constitution has a period stipulated for one to hold a position and Mwonzora was supposed to leave office in 2019.
Douglas Mwonzora Kudzanai Mashumba MDC T Leader MDC-A president Nelson Chamisa Yvonne Musarurwa
Parly concerned by government’s unauthorised expenditure of $6.8 Billion